Daawo: Khudbadihii ugu danbeeyay iyo dardaaranka madaxda xisbiyada - NorSom News
Daawo: Khudbadihii ugu danbeeyay iyo dardaaranka madaxda xisbiyada
Waxaa xaley tv-ga qaranka Norway lagu qabtay doodii ugu danbeysay ee u dhaxeysay gudoomiyayaasha xisbiyada, taas oo aheyd tii ugu adkeyd ee dhexmartay xisbiyada, isla markaana aan waxbo la isku reeban.
Dooda kahor ayuu NRK madaxda xisbiyada siiyay hal daqiiqo oo midkasta uu kusoo koobi karo fariinta ugu muhiimsan, uguna danbeysa ee uu rabo inuu bulshada u gudbiyo doorashada kahor.
Halkan ka daawo dardaaranka madaxda xisbiyada oo sawir fiican ka bixinaya barnaamijkooda doorashada. NRK.NO
Previous articleUDI: ku dhawaad 80% soomaalida codsatay dhalashada Norway, wey helaan.
Next articleUDI: Waxaan dib u dhiska ka caawinaa hey´ada socdaalka iyo Jinsiyadaha dowlada Soomaaliya.